China CPL-Coil yekuCoil Polishing Line fekitori nevatengesi | Zhongshuo
CPL inoiswa kunyanya pakubvisa diki diki mukutonhora kutenderera SS coil mumvura, riwane kupedzisa kushongedza, kureva Nha .3, No.4, HL, SB & Duplo. Iyo inotonhorera inogona kuve emulsion kana mineral mafuta. Kutonhorera fera uye system yekudzokorora kwakakosha mutsara wakakwana. ZS CPL yakagadzirirwa kutonhora kutenderera coil ku coil kugadzirisa kumusoro kubva pa100 kusvika 1600 mm pahupamhi uye hukobvu huri pakati pe1.4 kusvika 3.0 mm. WUXI ZS inopawo CPL yakaoma. Cork bhandi ichaiswa kuti uwane kupedzisa yakafanana ne ...
CPL inoiswa kunyanya pakubvisa diki diki mukutonhora kutenderera SS coil mumvura, riwane kupedzisa kushongedza, kureva Nha .3, No.4, HL, SB & Duplo. Iyo inotonhorera inogona kuve emulsion kana mineral mafuta. Kutonhorera fera uye system yekudzokorora kwakakosha mutsara wakakwana. ZS CPL yakagadzirirwa kutonhora kutenderera coil ku coil kugadzirisa kumusoro kubva pa100 kusvika 1600 mm pahupamhi uye hukobvu huri pakati pe1.4 kusvika 3.0 mm. WUXI ZS inopawo CPL yakaoma. Cork bhandi ichaiswa kuti uwane kupedzisa yakafanana neScotch-Brite kupedzisa (SB), yekumhanyisa kumhanya kweCPL yakaoma inogona kunge iri 50m / min kana kupfuura.
Kubatsira kweZS CPL
1. Solution mupi, ZS inopa mutsetse uzere kusanganisira Unwinder, Rewinder, Loading Mota, Pini Roll, Flattener, Crop Shear, Kushambidza uye Kuoma system, PVC coater. Panguva imwecheteyo isu tinopa iyo inotonhorera Filtration uye Recycling System, Mist Collector, Fire Fighting System uye Briquetting Machine.
2. Hapana hurema uye chatter chiratidzo kubva pamutsara
3. Line kumhanya kusvika 40m / min max.
4. Line rakakodzera maawa makumi maviri nemana achienderera kugadzirwa
5. Yakakwira mwero weOperation, kureva Constant Load. Welding Seam Tracking System (inosarudzika kugoverwa ne welder)
6. Kushanda uye kuchengetedza zvine hushamwari
Rudzi rwechigadzirwa: Stainless simbi coils
Kukura kwezvinhu zvinosimbisa simba:
Min / Max zvinhu zvakadzama:
Strip wide min / max:
Kurema kwemweya wecox pakupinda:
Kupinda coil ekunze dhayamita / max:
Kupinda coil yemukati dhayamita:
Kurema kwemweya wecoil pakubuda:
Exil coil diameter / max:
Kunze coil yemukati dhayamita:
Max. 40 yekudzosera.5,5m / min yekugadzirisa
Yepfuura: SPL-Sheet kuSheet Polishing Line